Iska ilaali shantan dabeecad haddii aad dooneyso bulsho la dhaqan wanaagsan
Home Aragti-doon Iska ilaali shantan dabeecad haddii aad dooneyso bulsho la dhaqan wanaagsan
Ka fogow shantan dabeecad ee nolosha ciriiriga ka dhiga
Qof kasta oo inaga mid ah wuxuu leeyahay qaab uu u eego ama u arko dunida. Si inoo gaar ah oo aan u fasirano dhacdooyiinka iyo ficillada dadka kale.
Taas ayaa lagu tilmaamaa sida ay tahay dabeecaddeena. Waa arrin la xiriirta wax nagu soo dhacay ama aan u soo joognay markii aan carruurta ahayn ee aadka aan u yareyn.
Haddii dabeecaddeena ay markasta na tusto cabsi iyo argagax, waxkastana waxaan u arkeynaa si khaldan oo ciqaab xun leh.
Dabeecadaha noocaas ah waxay inoo horseedayaan baaba’ iyo in aan nafteena lug-goyno. Waxay sababaan in qofka uu iska ilaaliyo fursadaha guusha u horseedi kara.
In dabcigeenu wanaagsanaado, oo aan noqoto dad diyaar u ah fursadaha waxbarasho iyo faham dheeraad ah iyo in aan u dulqaadano dadka kale, waa in aan barano adeegsiga dabeecadaha wanaagsan, u adkeysiga dhibaatada, iyo eegidda fursadaha cusub.
Shanta soo socota waa dabeecadaha cidhiidhiga iyo dhibaatada sababa ee ugu badan:
Carruurta qaar, inta ay aadka u yaryihiin waxaa lagu arkaa dabeecad colaad iyo dagaal ah. Canugaas waxaa u muuqdo duni dagaal iyo colaad iyo cabsi ah. Taas waxay u horseedaa in ay raadiyaa sidii ay colaaddaas u maamuli lahaayeen iyagoo noqdo kuwa dagaalka billaabo markasta.
Inta ay korayaan, way la sii qabsanayaan dabeecaddaas oo isu bedesha xanaaq badan iyo jahwareer. Hadallada ugu badan ee laga maqlo waxay noqonayaan “eeg dadka oo dhan way iga soo horjeedaan; la ima jeclo”, iyo arrimo kale oo aysan caddeyn u haynin.
Markay weynaadaan waxay noqonayaan lamaane colaad badan ama xanaaqsan markasta, oo ka shaki qaba in uusan jeclayn qofka kale ee nolosha ay wadaagaan.
Sidoo kale waa dad difaac ku jira aalaaba oo aan la dhaliili Karin ama waxba la weydiin Karin. Haddii la raali geliyana waxay u arkayaan in arrinta runta ah ee ay aaminsan yihiin la daboolayo ama la qarinayo.
Dadka noocaas ah waxay leeyihiin qaabab sir u ah oo ay colaada ku kiciyaan – markasta mid iyaga ku wajahan. Tusaale, shaqada way ka soo daahaan, way ku ciyaaraan shaqadii loo dir, iyo marka ugu horeyso oo ay kaa soo horbaxaan waxay kaala hor yimaadaan xanaaq iyo wax aan lagu farxin.
Balse waxaas oo dhan waxay ku eedeeyaan dad kale ama arrimo aan meeshaba oolin – ujeedadooda waa in ay kaa xanaajiyaan ka dibna ay qaladka adiga kuu saaraan.
Haddii adiga aad isku aragto, in aad xakameyso oo aad ka war hayso waa tallaabada ugu muhiimsan.
Haddii aad ku aragto dadka kale ee aan la tacaamusho, waa in aadan ugu jawaabin sida ay iyaga filayaan. Tallaabadaas waxay ka hor tageysaa arrintan xun ee ay kula ciyaarayaan si ay dembiga adiga kuu saaraan.
Dabeecadda qofka xanaaqa iyo walwalka badan
Dadka noocan waxaa laga fishaa dhammaan noocyada caqabadaha iyo dhibka oo xaalad kasta ay kala hortagayaan. Dadkana waxay markasta ka filayaan dhalleeceyn ama khiyaano.
Waxaa arrimahaas oo dhan ku sababaya cabsida, xanaaqa iyo walwalka ay qabaan. Waxa dhabta ah ee ay ka baqayaanna waa in ay lumiyaal xakameynta xaaladaha soo mara.
Ujeedadoodu waxay tahay in ay isku deyaan yareynta waxa dhici kara iyo in ay soo koobaan dunida ay la tacaamulayaan.
Tusaale, nolosha qoyskooda – waxay isku deyayaan in ay iyaga maamulaan dhamaan dhaqamada iyo dabeecadaha reerka. Waa kuwo raadinaya in si gaar ah loo daneeyo loo na daryeelo.
Dhanka shaqadana, waa kuwo isku deyaya in wax kasta si sax ah loo qabto, si khaldanna u maareeya xaaladaha iyo dadka ay shaqo wadaagga yihiin.
Balse waxay ku dambeynayaan xaalad ay noloshooda ku cayaaraan oo ay baabi’iyaan, ayna waayaan qof la shaqeysta ama la dhaqmo.
Sababtoo ah ma jecla in ay qabtaan wax aysan aqoon ama ku faraxsanayn – waxayna ugu dambeyn noqdaan kuwa ciil badan oo cadho u dhinta.
Haddii adiga aad isku aragto dabeecadahan, talada ugu wanaagsan waa in awooddaada aad ku bixiso shaqo badan. Waa in aad adiga sameyso howl badan si waxa aad rabto u soo saarto, halkii aad dadka kale eedeyn lahayd.
Awoodaada dhanka xakameynta u weece shaqooyiin wax ku ool ah. Marka aad dadka kale la tacaamuleysana, isku dey in aad fahamto oo aad wax ka barato dabeecadahooda iyo sida ay u dhaqmayaan, kuna xushmee middaas.
Haddii dabeecadaha noocan ah aad ku aragto dadka kale, waxaad ku dadaashaa in aysan ku saameyn xanaaqooda, balse waxaad siisaa galaangalka dhanka nolosha ee ay waayeen markii ay yaraayeen.
Dabeecadda ka fogaanshaha wax kasta
Dadka noocan ah waxay dunida ka dhex arkaan muraayadaha kalsoonidarada. Waxay inta badan la xiriirtaa shaki ku saabsan awoodooda iyo xirfadda ay leeyihiin iyo maankooda.
Dadka noocaan ah marka ay ka baxaan carruurnimada waxay ku dadaalayaan sidii ay uga fogaan lahaayeen waxkasta oo masuuliyad uga baahan.
Waxay ka baqayaan in kalsoonidaro ay ka qaadaan oo lagu qiimeeyo wixii ka hallaaba ama ay qaldaan.
Si miyir leh ama si miyir la’aan ahba, waxay ku dadaalaan sidii ay cudur daar ula imaan lahaayeen si aan shaqo ama howl adagba loogu dirin.
Waxaa kaloo lagu garanayaan in shaqo kasta ay ka soo tagaan, ama ay markasta bedeshaan xirfadaha ama xitaa in ay burburiyaan qoyskooda, si ay wax masuuliyad uga baahanba uga badbaadaan.
Sidoo kale waa dad yeesha balwad iyo waxyaabo aan wanaagsanayn, waxayna ku eedeeyaan walwalka haya ama dad kale si aysan iyaga u qaadin masuuliyadda khaladka ay sameeyaan.
Arrimaha kale ee ay adeegsadaan waxaa ka mid ah in waqtiga ay wax aan fiicneyn ku lumiyaan iyo in shaqooyiinka ay billaabaan xilli dambe, si aan loogu eedeyn natiijada xun ee ka soo baxda.
Haddii aad isku aragto dabeecaddan, waxaad sameyn kartaa in cabsida aad iska saarto oo aad qaadato mashruuc adag ka dibna waqtigaaga iyo awoodaada oo dhan aad geliso siduu uu ku guuleysan lahaa. Haddii taas ay dhacdo waxaa kaa baxaya cabsida.
Haddii uu fashilmana, waxaad u qaadataa in uu cashir kuu yahay, balse ha u qaadan cabsi iyo dhammaadka noloshaada.
Dadka kale ee dabeecaddan leh ka fogow hana la yeelan wax xiriir ah. Sidoo kale waxaad ka fogaataa in aad badbaadiso ama caawiso, sababtoo ah adiga ayey khaladka ku saari doonaan.
Dabeecadda niyad jabka
Intii ay carruurta ahaayeen, dadka noocan waxay dareemi jireen in aan la jeclayn ama waalidkooda aysan xushmeynin. Waa dad aaminsan in iyaga ay saxnaayeen oo waalidkooda ay khaldanaayeen – sida loo koriyay.
Marka ay soo weynaadaan, waxay uurka ku sidaan go’aamo iyo aragtiyo xun, waxayna aaminsan yihiin in aysan “qiimo lahayn”.
Wax kastoo ku hareereysan waxay ka dhex arkaan khladaad iyo walbahaar iyo niyad jab. Waxaa lagu arkaa in mararka qaar ay bulshada iyo dunidaba ka dhex baxaan.
Dadkan waa kuwa markasta niyadda ku hayo sidii ay si sir ah ugu dhaawici lahaayeen dadka kale, waxayna dhiirageliyaan dabeecadaha khiyaanada iyo dhalleeceynta dadka kale ee aan khaladkaba ka gelin.
Haddii ay guul gaaraan, waxay isku deyaan in ay fashiliyaan guushaas, sababtoo ay waxay isu haystaan in aysan u qalmin guusha iyo waxa fiicanba.
Waxay quutaa in dadka kale ay niyad jebiyaan oo walbahaar ay ku beeraan. Haddii aad la tacaamushana waxay ku dareemsiinayaan in aad dembiile tahay.
Haddii aad isku aragto dabeecadahan, waxaad tamartaada u weecisaa dhanka shaqadam gaar ahaan dhanka farshaxanka iyo wax qoridda.
Marka aad keligaa tahay, fakarkaaga u leexi dhanka wax soo saarka fiican. Iska soo saar dareenka xun iyo dhankaaga madow, waxaadna noqotaa qof shaqo badan.
Weligaa ha isku deyin in aad khudbo iyo hadal dheer ku caawiso dadka niyad jabsan. Ha uga sheekeynin nolosha aan caawiga ahayn iyo horumarka.
Taa bedelkeeda, waxaad iska dhigtaa qof ku waafaqsan waxa ay aaminsan yihiin, ka dibna waxaad si khibrad ahaan ah u bartaa wanaagga nolosha taa oo sare u soo qaadi karta niyaddooda iyo awoodooda.
Dabeecad aaminsanaanta in lagu dulmiyay
Xilligii carruurnimada, waxay dadka noocan ah aaminsanaayeen in waalidkooda aysan ka helin kalgaceyl iyo jaceylkii ay u baahnaayeen. Waa dad damaacigoodu ahaa in carruurta kale ay wax ka badsadaan.
Niyad jabkaas iyo naceybkaas ayey ku waynaadaan. Waxayna khubaro ku yihiin qiimeynta wejiyada dadka kula kacaya xushmad darada iyo quudhsiga.
Wax kasta oo la sameeyo iyaga ayaa iska dhex arka; Haddii ay arkaan qof haysta wax ka badan waxooda, waxay la tahay cadaalad daro iyo in la aflagaadeeyay.
Marka ay sidaa dareemaan, ma hadlaan balse calooshooda ayey ku sii weynaataa naceybka iyo cuqdadda ay qabaan iyo cadaalad darada ay tirsanayaan. Si fudud na kuma ilaawaan waxaas oo dhan.
Sababtoo ah waxay leeyihiin dareen joogto ah oo ku saabsan in khalad laga galay ama la xumeeyay, taasna waxay u gudubtaa meel kasta oo ay tagaan, waxayna inta badan arkaan dad dulminaya dadka kale.
Sidoo kale waxay aaminsan yihiin in dadka kale ay ka sareeyaan xitaa haddii aanan la arkin. Waa kuwa madaxooda kor u haya aalaaba.
Sidoo kale waxay jecel yihiin in ay bilaabaan dagaal iyo muran mana awoodaa in ay dhameystiraan xanaaqooda iyo dulmiga ay tirsanayaan.
Haddii adiga aad isku aragto dhaqamada noocan ah, waxaad isku deydaa in aad ogaato ka dibna aad iska saarto niyad jabka iyo dulmiga aad tirsaneyso ee noloshaada saameynta ku leh.
Waxaa wanaagsan in aan xanaaqaaga muujiso isla markiiba, halkii aad isku celin lahayd oo dhaawac iyo burbur uu u geysan lahaa mustaqbalkaaga.
Sidoo kale, si aad u garato dadka leh dabeecadahaas, waa in aad noqotaa qof si wayn u feejigan. Waxaad ku baran kartaa adigoo baara noloshoodii hore iyo xilliyaddii ay dadka kale ku qarxeen.
Waxaad sameyn kartaa in si tartiib ah aad u hanato aaminaadooda, aadna si aayar ah u yareyso shakiga ay qabaan. Balse ogow, haddii waqti badan aad agtooda ku qaadato waxaad kicin doontaan dulmi hore oo ay tirsanayaan, jawaabtoodana way xumaan kartaa.
Waxaa wanaagsan in aad ka fogaato dadka leh dabeecadda noocan ah.
Previous articleTallaabooyinka kuu horseedi kara guul degdeg ah oo dhanka nolosha ah
Next articleShanta nooc ee xaasidnimada ugu xun dunida